The Gardener: 2013-09-29
ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင် သောင်တင်နေသော ဂဏန်းတစ်ကောင်၏ စကားသံဖြစ်သည်။ တော်လဲသံများကို သီရရီချိတ်ဆွဲရန် တောင်စွယ်များ အချွန်အတတ်ဖြစ်နေရန်လိုသည်ဟုထင်သော ဆည်းဆာနေရောင်ခြည်အောက်တွင် ရွှေဆေးဖြင့်ချယ်သထားသော သဲပြင်လွလွရှိနေသေးသည်။ နေဝင်ချိန်သည် ခမ်းနားလွန်းနေသည်။
Be kind, for everyone you meet is fightingahard battle. (Philo of Alexendria) ဘဝတိုက်ပွဲကြမ်းကိုရင်ဆိုင်နေရသောလူတိုင်းအတွက် ကြင်နာစေလိုသူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ ထို့အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရသည့်တိုင် အချိန်များ ပါးရှားလာမှုနှင့်ထပ်တူ၊ အလျင်စလိုဖြတ်သန်းသွားလိုက်ရသဖြင့် တိတိကျကျ၊ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ် သိသိသာသာ ခံစားလိုက်မိခြင်းတော့မရှိလိုက်ပါ။
မင်းသားလေး၏ နှင်းဆီပင်မှာ စကြာဝဠာတစ်ခွင်လုံး သူနှင့်မျိုးတူမရှိဟု ညာခဲ့ဖူးသည်။ ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲတွင် နှင်းဆီပန်းပင် ငါးထောင်ကိုတွေ့မှ မင်းသားလေးသည် ညာတတ်သော နှင်းဆီကို တွေးမိခဲ့သည်။ အချိန်လွန်မှသိရှိခဲ့သော လိမ်ညာမှုများအတွက် မည်သူမှ သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ခဲ့ပါ။
"ငါအခုလုပ်နေတာဟာ ငါ့ကိုယ်ငါ ဝေဒနာကနေ ခွာထုတ်နေတာ။" ဟု မော်ရီဆိုသော သေဆုံးခါနီး ပါမောက္ခအိုကြီးကဆိုလေသည်။ ဝေဒနာကို ပညာသတိဖြင့်ပယ်သတ်ရသည်မှာလည်း သဘာဝတရား၏ဆိုဆုံးမသံတစ်စဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။
စိုးစဉ်းမျှ မသိသာသော ထွက်ခွာမှုမျိုးဖြင့် အတိတ်သည် မှတ်သိစိတ်ထဲမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့လေပြီ။ ထင်သလောက်မလွယ်ကူသော မိမိ၏ဝိဉာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကို တစ်စစီခွဲချေကြည့်နေရာမှ နာကျင်မှုများထုံသွားခဲ့လေသည်။ ဟာသတစ်ပုဒ်အတွက် တန်ရာတန်ကြေးအဖြစ် လေချွန်သံရှည်တစ်ခုသာလိုအပ်တော့သည်။ မနက်ဖြန်များကို တစ်ယောက်တည်းဆက်လျှောက်တတ်စေရန် ကျွန်တော်သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။
J.D. Mc Clatchy ၏ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော Resignation အစတွင်၊ Willa Cather ၏ quotes တစ်ခုကို ဤသို့သုံးစွဲထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ " I like trees because they seem more resigned to the way they have to live than other thigs do." အမေရိကန်စာရေးဆရာမ Willa Cather တွေ့မြင်ခဲ့သော သစ်ပင်များအနက်မှ တစ်ပင်မှာ ကျွန်တော်ဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်းတစ်ယောက်လိုဆိုတဲ့ ကဗျာမှာ နေမျိုးကြီးက "အမြဲတမ်းတစ်ယောက်လိုဟာ အစကတည်းက မရှိဘူးတဲ့" လို့ ဘာလို့ထည့်ရေးတာလဲဆိုတာကို အခုတော့ နားလည်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
တစ်စက္ကန့်မျှရှင်သန်မြင့်မားနိုင်စိမ့်ငှာ လေထဲတွင် ဖြတ်ခနဲသေပစ်လိုက်သည့် မီးပန်းများကိုသာ ငေးကြည့်နေမိတော့သည်။ ထိုအရာသည် ရှင်သန်ခြင်း၏ ဒုတိယပုံစံငယ်ဟုဆိုရလိမ့်မည်။ ထိုဘဝကို အင်မတန်နှစ်သက်လိုလားနေမိသည်။
ဇေယျာလင်း၏ ကဗျာစာအုပ်များဝယ်ထားသည်။ မဖတ်ဖြစ်။ နှစ်ထောင်ချင်းအတူတူ ဦးလှိုင်ထက် စာလုံးရေများသည်ဆိုပြီး ဈေးတွက်တွက်ပြီးဝယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူသေပြီး နာမည်ကြီးပြီဆိုလျှင် ဖတ်ရင်ဖတ်မည်စိတ်ကူးသည်။ သို့မဟုတ် သူ့အနုပညာကို သေမတတ်မြတ်နိုးသည်ဆိုသည့်သူများကို လက်ဆောင်ပေးပစ်မည်ဟု စိတ်ကူးမိသည်။
ဦးလှိုင်၏ ဆိပ်ကမ်းတွင်တော့ အမုန်းမရှိ စစ်ပွဲမရှိ တရားရပြီးမှ ထပ်မံငြင်းခုံစရာ တရားမရှိ ဟုဆိုသည်။ ဆိပ်ကမ်းတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက်ရှိလျှင် သာ၍ကောင်းမည်ထင်သည်။
အနဝဇ္ဖာနိ ကမ္မာနိ အရတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အကုသိုလ်ကင်းကင်းပျော်စရာကောင်းတာတစ်ခုလုပ်နေတာဟာ မင်္ဂလာပါပဲ။ အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ ဆိုတာကတော့ သောကမရှိဘူး။ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ပူဆွေးခြင်းမရှိဘူး။ ကိလေသာအညစ်အကြေးမရှိဘူးဆိုတာဟာလည်း မင်္ဂလာပါပဲ။ မင်္ဂလာရှိအောင်နေကြဖို့လည်းလိုနေသေးသည်။
Pslam 118 တွင်တော့ O GIVE thanks unto the LORD: for he is good ဟုဆိုသည်။ ထိုစာသားသည် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ကာလများရွေ့လျောလာသောအခါ မေ့လျော့ခံ ဂီတတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် သိုးကျောင်းသော တောသားလေးမျှသာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘုရင်ဖြစ်လာသောအခါ သီချင်းထရေးပြီး ဗျပ်စောင်းတီးလိုက်ရာမှ တစ်ခွေတည်းပေါက်သွားခဲ့ဟန်တူသည်။ ကြိုးစားသော တောသားများကို နောက်နောင် အားပေးအားမြှောက်ပြုမည်ဟုစိတ်ကူးနေသည်။
လှိုင်းများရိုက်ခတ်နေသော ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ပြေးလွှားနေသော ဂဏန်းငယ်တစ်ကောင်အတွက် အထွေအထူးရည်ရွယ်ချက်မရှိလှပါ။ သေဆုံးနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သူ့ကိုယ်သူ ရိပ်မိရန်အတွက် ရှင်သန်လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တစ်ခုအနေဖြင့်သာ ပြေးလွှားနေခြင်းဖြစ်သည်။
နေဝင်ဆည်းဆာသည် မရပ်မနားပြေးလွှားနေသော ဂဏန်းတစ်ကောင်၏ အခွံမာအောက်မှ နှလုံးခုန်သံမဲ့ခြင်း၏ ဒိဌဓမ္မကို အံ့အားသင့်နေရာမှ နေဝင်ချိန်အမီ နေလုံးကြီးအား ထိန်ပင်ပေါက်ရာ ပင်လယ်ထဲသို့ အစောတလျှင် နှစ်မြုပ်ပစ်လိုက်ရသည်။
နိဂုံးသည် ရှေ့ချုပ်ပြီးစိတ်ကိုမမှတ်မိတော့သော နောက်စိတ်၏ ဥပေက္ခာသက်သက် အရှုခံနှင့် အရှုဉာဏ်၏ ထိခတ်မိသံမျှသာ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ။
၁Holy Bible : King James Version
၆။The Best American Poetry 2008
၇။ Mitch Albom။Tuesdays with Morrie
၈။Antoine de Saint-Exupery။ The Little Prince
၉။Rjonda Byrne။ The Magic